कुलमान – ताजा समाचार
हिजो संसदीय लेखा समितिको बैठकमा संसदहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ९ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन नसकेको भन्दै उनैले खाएको जसो गरेर भ्रष्ट्राचार ग रे को आरोप लगाए । उनीहरुले अख्तियारलाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिए । त्यस्तै पूर्व कार्यकारी निर्देशकलाई पनि मुद्दा दायर गरी कारवाही गर्न भनेको छ । २० घण्टा सम्म लोडशेडिङ […]
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दमक, भरतपुर र पोखराको विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले राजधानीपछि उपत्यका बाहिरका मुख्य सहरको वितरण प्रणाली पनि भूमिगत बनाउने तयारी गरेको हो । ठूला सहरका मुख्य सडकको वितरण प्रणाली भूमिगत गर्न अध्ययन भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । उनका अनुसार वितरण प्रणाली दिगो, भरपर्दो […]
कुलमानले ठेकेदारलाई भने : राति १० बजे फिल्डमा आउँछु, काम नभएको देख्नु नपरोस् !
काठमाण्डाै – नेपाल विद्युत प्राधिकरण माताहतमा भइरहेका कामको नियमित अनुगमनमा जानु कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दैनिकी नै बनेको छ । सलाम छ कुलमानलाई समयमै काम पूरा गर्न उहाँ कहिले नागरिकसँग अनि कहिले संसदीय समितिमा सांसदसँग नै बाझेको देखिन्छ । ठेकेदारलाई फकाएर होस् या चेतावनी दिएर हाेस्, काम बेलैमा सक्न घिसिङको दौडधुप बढेको देखिन्छ । सोमबारदेखि […]
काठमाडौं , नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशलाई बिजुलीबाटै धनी बनाइने बताउनुभएको छ । उहाँले सरकार अगाडि सारेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयन गर्न विद्युत प्राधिकरण लागि परेको बताउनुभएको हो । घिसिङले मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको बताउनभुयो । उहाँका अनुसार तीन […]
काठमाडाैं । व्यक्तिगत व्यवसाय विस्तारका लागि जग्गा सम्याउदा सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानीनोक्सानी पुगे त्यसले पार्ने प्रभाव कति विकराल होला, आम मानिसले सहजै अनुमान गर्न सक्छन् । यस्तै भएको छ मस्र्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनमा । सो प्रसारण लाइनको २०५ नम्बर टावर पहिरोको जोखिममा परी ढल्ने अवस्थामा पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५को […]
यसकारण काठमाडौँमा जुनसुकै बेला लोडसेडिङ हुन सक्ने
मर्स्याङ्दी–स्यूचाटार १३२ केभी प्रसारण लाइनको २०५ नंम्बर टावर पहिरोको जोखिममा परी ढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–५को कुरिनटारस्थित मनकामना केबलकार जाने गेटको नजिकै रहेको जग्गा पर्शुराम घिमिरेले खन्दा टावर नै ढल्ने अवस्थामा पुगेको हो । जग्गाधनी घिमिरेले पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको उक्त स्थानमा होटल खोल्न भिरालो जग्गालाई खन्दा पहिरो गई त्यहाँभन्दा माथि रहेको टावरको […]
खुशीको खबर ! अब विश्वकै सस्तो बिजुली नेपालमा निकाल्छु : कुलमान घिसिङ्ग
देशलाई उज्यालो बनाएका कुलमानले आँखा दान गर्ने
१२ पुस, काठमाडौं: विद्युतको उज्यालाेले देशलाई नै झिलिमिलि बनाएका कुलमान घिसिङले आँखा दान गर्ने भएका छन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका घिसिङले तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममा मृत्युपछि अाफ्नाे आँखा दान गर्ने घोषणा गरेका हुन । देशलाई नै उज्यालो बनाउने अभियानमा लागेका घिसिङ नेपालमा निकै रुचाइएका व्याक्ति समेत हुन ।नेपाल विद्युत […]
कुलमानलाई कामको चाप: घडीको काँटाले रातको १० बजेको संकेत गर्छ, तैपनि उनलाई हतार हुँदैन
काठमाडौं। कुलमान घिसिङले सारा मुलुक झलमल्ल बनाएका छन् । यसका लागि उनले घामको उज्यालो त्यागेका छन् । अर्थात उनको ज्यानमा घामको न्यानो पर्दैन । किनभने, दिनभर उनी कार्यलय/कार्यक्षेत्रमा खटिएका हुन्छन् । घाम ताप्ने फुर्सद हुँदैन । यही कारण उनको शरीरमा ‘भिटामिन डी’को कमी छ । कुलमानले सुनाएका थिए,कहिलेकाहीँ चिकित्सकले भिटामिन डीको औषधी सेवन गर्नुपर्छ भन्छन् […]
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि कुलमान ब्याक, महशुल नतिर्ने उद्योगको विजुली नकाटिने
काठमाडौं । गतसाता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शिवम् सिमेन्टलाई एकसाताभित्र महशुल नतिरेमा लाइन काटिने उल्लेख थियो । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शतिष मोरको लगानी शिवम् सिमेन्टमा छ । प्राधिकरणले एकसाताको समय दिएको बितेपनि पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार लाइन भने काटेन । लोडसेडिङको बेला डेटिकेटेट फिडर लिएर करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ शिवम् सिमेन्टले नतिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । […]
ग्याँसको लाइनमा नबस्नुहोस बिजुलीमै खाना पकाउनुहोस,कुलमानको यो अनुरोधलाई से यर गरी सबैमाझ पुराउनुहोस्
ताजा समाचार । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भाइरसको संकम्रण देखिन थालेपछि विश्वभरका मानिसहरुले अत्यावश्यक सामानहरुको जोहो गर्न थालेका छन् । नेपालीहरुमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको सङ्कमण त देखिएको छैन (एकजना निको भएर घर फर्केको बाहेक) । तर कोरोनाले कुनै भौगोलिक सिमा नहेर्ने भएकाले यसबाट सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । केही दिनदेखि नेपालमा पनि विगतको नाकाबन्दीको झल्को दिने […]
काठमाडौं । के घरबेटीले डेरावालसँग बिजुलीको मिटर बिगार्ने र उठेको बिलभन्दा बढी रकम असुलिरहेका छन् ?यदी तपाईंलाई घरबेटीले बिजुलीको पैसा बढी असुलिरहेका छन् भने अब विद्युत प्राधिकरणमा फोन गर्नुस, त्यस्ता फटाहा द्रब्यपिशाच घरबेटीमाथि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कारबाही गर्दैछन् । यो नम्बरमा गर्नुहोस प्राधिकरणलाई फोन : 977-1-4153051 जेनतेन काम गर्ने र डेरामा बसेर जीविकोपार्जन […]